कसरी आफ्नै HP प्रिन्टरहरू लागि क्यासेट भर्न
मुद्रक मसी के तपाईं आफ्नो घर कार्यालय सिर्जना भने, काम छ कि धेरै महंगा कुराहरू एक हो। निम्न अवस्थामा हैरानी हुन: तपाईं आफ्नो नयाँ डिजिटल क्यामेरा संग तस्वीर दर्जनौँ गरेका छन्, तपाईंको कम्प्युटरमा अपलोड केही छाप्न र क्यासेट मा चाँडै मसी बाहिर चल्छ। आफ्नो दर सधैं धेरै उच्च छ, र तपाईं यसलाई केहि संग के गर्न सक्दैन।
यस लेखमा निर्देशन समावेश भएको क्यासेट भर्न कसरी लागि एक मसी जेट मुद्रक आफ्नै सट्टा नयाँ खरीद मा हिमाचल प्रदेश। यसरी तपाईं एकदम सभ्य रकम बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
HP मुद्रक आफैलाई लागि क्यासेट Refill गर्न, पसलमा कार्यालय उत्पादनहरु भर्न मसी को एक सेट किन्न। धेरै किनमेल सुविधा, कार्यालय उत्पादनहरु मा विशेषज्ञता, एक कम मूल्य मा एक सेट प्रस्ताव (नियम, यसको मूल्य एक नयाँ घटक को लगभग आधा मूल्य छ)। तपाईं पनि विभिन्न अनलाइन स्टोर यी किरा पाउन सक्नुहुन्छ।
मसी को प्राप्त सेट, कागज तौलिये को एक रोल, साथै एक ठूलो, सपाट काम सतह (डेस्क वा बोर्ड) मा केही पारदर्शी टास्ने टेप गुना। खाली क्यासेट बाट उपकरण हटाउन। तपाईं उसलाई काम गर्दै गर्दा ढक्कन वा फ्यूज बन्द गर्न निश्चित हुनुहोस्।
काम रंग गर्न डिस्पोजेबल रबर वा प्लास्टिक पन्जा आफ्नो हात राख्नु। लिन कागज तौलिया र दुई पटक आधा मा गुना। तालिका मा मसी रिसाव बच्न कागज तौलिया मा लगातार काम। यसमा खाली क्यासेट ठाँउ।
तपाईं हिमाचल प्रदेश मुद्रक आफैलाई लागि क्यासेट भर्न अघि, दानाको एक विशिष्ट प्रकार भर्नका लागि कसरी सिक्न, मसी सेटमा समावेश गरिएको छ कि निर्देश पुस्तिका पढ्नुहोस्। यस लेखमा मात्र सामान्य निर्देशन प्रदान गर्दछ।
को क्यासेट को शीर्ष मा प्वालहरू भर्नको लागि हेर। यो निराशा लेबल मा औंलाहरु दल्नु द्वारा महसुस गर्न सकिन्छ। केही कारतूस धेरै खाडल छ, तर ती केवल एक सधैं भरिएको सकिन्छ कि मसी ट्यांक गर्न जान्छ। यो प्वाल स्पन्जले हुनेछ।
मसी कारतूस को माथिल्लो भागमा भरने खोल्ने पियर्स एउटा तेज पेन्सिल प्रयोग गर्नुहोस्। साथै, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चक्कु वा एक पेचकस को शीर्ष लेबल हटाउन (तपाईं किरा संग आएका पुस्तिका को लेआउट जस्तै स्थानहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ)।
सियान, म्याजेन्टारपहेंलो: नियम, कालो बाहेक, तीन रंग मसी आपूर्ति। स्थापना निर्देशनहरू पालना, प्रत्येक रंग को सम्मिलन लागि अन्तर प्रयोग गरेर वा रंग पहिचान गर्न प्रत्येक प्वाल मा एक दांत कोट्याउने सिन्का धक्का। को क्यासेट उपकरणमा चिह्नों कहिलेकाहीं गलत छ भनेर यो हुन्छ, र तपाईं झुक्किएर गलत रंग मसी दाना भर्न सक्नुहुन्छ। यसैले मान्छे मुद्रक लागि क्यासेट भर्न प्रयास गर्दा के हुन्छ हिमाचल प्रदेश 650 स्वतन्त्र (र समान मोडेल)।
सही प्वाल पर्याप्त गहिरो मा मसी को सुई आकारको बोतल को लामो अन्त सम्मिलित: यो क्यासेट को तल penetrated छ। यो हावा चलाउन ताकि होइन र क्यासेट भर्दा फोम सिर्जना छैन यो महत्त्वपूर्ण छ। हावा खल्ती रोक्न मसी पुग्नेछ को printhead, को क्यासेट काम गर्न सक्दैन कारण जो।
ठीक हिमाचल प्रदेश 655 मुद्रक आफैलाई लागि क्यासेट Refill गर्न, ढिलो बहने आन्दोलनहरु मसी थप्नुहोस्। तिनीहरू धेरै खन्याउन छैन ताकि, भरने प्रक्रिया नजिक ध्यान। द्रुत तपाईँले सानो मसी प्वाल बाहिर ooze सुरु देख्न रूपमा रोक्नुहोस्। , बोतल को गो दिँदै छैन बिस्तारै डिफ्लेट, (पूर्ण सुई हटाउने अघि) को क्यासेट फिर्ता रंग को एक बिट squeezing।
को को पूरा: कसरी आफ्नै HP प्रिन्टरहरू लागि क्यासेट भर्न
कागज तौलिया संग क्यासेट सम्पर्क ध्यान हटाउन। तपाईं पूर्ण सतह मा प्रदूषण र दाग हटाउनु छ।
स्पष्ट टेप एउटा सानो टुक्रा संग प्वाल कवर। यसलाई हे अंक इन्धन भर्ने लागि किरा समावेश भन्दा धेरै राम्रो काम गर्दछ। मसी माथिल्लो प्वालहरू देखि लीक गर्छ भन्ने होइन (यसलाई स्पष्ट टेप प्रयोग गर्न आवश्यक छ कि) निश्चित गर्नुहोस्।
भर्नु को विशुद्धता जाँच
पूर्ण HP मुद्रक आफैलाई लागि क्यासेट भर्न मसी रंग को प्रत्येक लागि माथि कदम दोहोर्याउनुहोस्। एक पटक तपाईंले सबै रंग भर्न धेरै राम्रो PAT (RUB छैन वा प्रेस) मुद्रण टाउको क्यासेट कागज तौलिया एक जोडेको टुक्रा प्रयोग गरेर। शायद, यो प्रक्रिया बारम्बार गर्न धेरै पटक आवश्यक हुनेछ। रंग अब trickle, मिश्रित र फोहोर तौलिया नभएसम्म यस्तो समय सम्म यो। तपाईं3सफा रंग ट्रेस रहन भने मात्र यो प्रक्रिया रोक्नुहोस्।
देखा कागज तौलिया मा भने फिक्का रंग वा रंग मा सबै खडा गर्दैन बाहिर, यस printhead भिजेको कपडा र त्यसपछि ड्राई blot। मसी खडा गर्नेछ रूपमा लामो यो धेरै पटक दोहोर्याउन।
मुद्रक मा क्यासेट स्थापना गर्नुहोस्। भनेर कहिल्यै, कुनै पनि मामला मा स्थापित गर्न सकिँदैन बगिरहेको क्यासेट सम्झना।
तुरुन्तै रंग राम्ररी विनियोजन गरिएको छ भनेर निश्चित गर्न एक परीक्षण फाइल प्रिन्ट गर्नुहोस्। विभिन्न पृष्ठ को एक सानो संख्या छाप्न यसलाई उज्ज्वल रंग संग मनमोहक फोटो छ।
तपाईं परीक्षण र इन्धन भर्ने लागि प्राप्त सेट जाँच गर्नुभयो गर्नुभएको चिन्ता छैन। यो प्रयास लायक छ, र कुनै आवश्यकता छ। आफ्नो कार्यहरू क्यासेट बिगार्छ द्वारा भने, तपाईं सधैं एउटा नयाँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मामला मा हिमाचल प्रदेश मुद्रक स्वतन्त्र (122) को अनुकूल नतिजा एकदम आफ्नो लागत कम छ रूपमा लागि क्यासेट भर्न प्रयास गर्न आवश्यक छ।
तपाईंले क्यासेट भर्न, यो नयाँ घटक रूपमा साथै वजन छ। आदर्श माथि भीड यसको समय लामो असफल हुन सक्छ। जेट प्रिन्टरहरू लागि यी घटक मसी भण्डारण गर्न स्पन्जले प्रयोग गर्नुहोस्, र ओभरफ्लो तपाईं मुद्रण लागि प्वाल बाट पैदा मसी उकालो प्रवाह गर्न सुरु, टाढा, को स्पन्जले शीर्ष moisten।
अर्को उपयोगी टिप
मुद्रक नयाँ क्यासेट भन्दा सस्ता सेटिङहरू लागि प्रयोग वा सजिलो को बिक्री मा फेला पार्न: र अन्तमा, तपाईं अर्को विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने सबै अरू असफल भयो। यो एक नयाँ क्यासेट समावेश छ (वा दुई: काले र रंग)। यदि यो हासिल भएको छ, तपाईंले नयाँ घटक लागत भन्दा कम मूल्यमा साथ 1 वा2कारतूस एक नयाँ उपकरण हुनेछ। यस कम्पनीको उत्पादन प्रिन्टरहरू अक्सर भविष्य खरिदका क्यासेट को खर्च मा एक लाभ बनाउन योजना, cheaply तिनीहरूलाई बेचन - एक चिरपरिचित मार्केटिङ चाल छ। मसी को थकान तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्, र त्यसपछि यो किन्न सस्ता छ भन्ने तथ्यलाई एक पटक फेरि एक नजर।
मसी thicken हुँदैन र सुक्खा
तपाईंको मसी कारतूस ड्राई नदेऊ। जाँच गर्नुहोस् र अर्डर काम राख्नको लागि यो समय समयमा Refill। यो एक लामो समय को लागि प्रयोग नगरिएको छोड्न छैन: प्रयास गर्नुहोस्। एक हप्ताको कम्तिमा एक पटक कुरा प्रिन्ट गर्नुहोस्। यो HP मुद्रक स्वतन्त्र (178) को लागि भरना क्यासेट अघि छ भने पनि अन्तिम अब उपकरण मद्दत गर्नेछ।
एक चरम अवस्थामा, नयाँ क्यासेट खरिद गर्न, तपाईं सधैं पुरानो पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। सफा सिरिंज ले, को plunger हटाउन र क्यासेट मा सिरिंज घुसाउनुहोस्। मुख गर्न सिरिंज को खुला शीर्ष संलग्न र हार्ड पर्याप्त झटका। यो मुद्रण टाउको गर्न घटिया वा thickened मसी धक्का मदत गर्न सक्छ। को क्यासेट को शीर्ष मा मसी मा गठन भएको बुलबुले गरौं होसियार छैन। हुन त्यसपछि कागज तौलिया संग क्यासेट को चुच्चो अन्त blot। आवश्यक भएमा धेरै पटक दोहोर्याउन। यो विधि एक पुनःभरिएको क्यासेट को उपयोगिता बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ।
रंग अझै पनि मुद्रण लागि कारतूस देखि जारी छ भने, पिचकारी एक वा दुई साना थोपा विशेष समाधान (अमोनिया को एक मिश्रण र बराबर भागहरु मा distilled पानी) गहिरो क्यासेट मा तल प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो थक्के गठन मसी भंग गर्न मद्दत गर्नेछ।
मुद्रण क्यासेट स्थापना पछि रंग को केवल एक हार्ड चल्छ भने, प्रिन्टर देखि यसलाई हटाउन र भर्नको प्वाल कवर टेप डबल-जाँच गर्नुहोस्। टास्ने टेप को पट्टी संग समायोजन यसलाई टिप्न र सार्न।
मुद्रक लागि कारतूस पटक-पटक भर्ने पछि, मुद्रण टाउको बिस्तारै लगाउने बाहिर हुनेछ। नियम, यो प्रक्रिया 10 पटक सम्म पटक-पटक गर्न सकिन्छ।
कोर2चरम QX9770: विशेषताहरु, समीक्षा, समीक्षा
AMD A8-3850 प्रोसेसर विनिर्देशों, तुलना प्रतियोगिहरु र समीक्षा
को GTX 560 तिवारी: विशेषताहरु र समीक्षा
फ्रिज मा पनीर को अब कसरी सुरक्षित गर्न? कति चीज फ्रिज भण्डारण गरिएको छ?
मास्को मा भँगेरा हिल्स। को स्पैरो हिल्स मा मन्दिर
भाषा मा हितोपदेश: लोकप्रिय बुद्धिको embodiment
"Somnol" तयारी: प्रयोगका लागि निर्देशनहरू, एनालॉगहरू, समीक्षाहरू
फिल्म "म चोट छु छैन": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र,
Freemasons को हुन्?
कसरी "100500" एक भिडियो पठाउन? भिडियो कार्यक्रम भेटिन्छ?